सर्वोच्चको फुटकोर्ट बस्ने, गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय हुँदै || राजनीति समाचार
सर्वोच्चको फुटकोर्ट बस्ने, गोलाप्रथाबाट...
सर्वोच्चको फुटकोर्ट बस्ने, गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय हुँदै
access_time 25 Nov 2021
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज (बिहीबार) पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बस्ने भएको छ । गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्नका लागि बैठक बोलाइएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाहेकका न्यायाधीशहरूबीच बुधबार भएको छलफलबाट बिहीबार ‘फुलकोर्ट’ बैठक राखेर गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । न्यायाधीशहरूको बैठकले १५ मंसिरदेखि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णयसँगै १५ मंसिरबाट सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने सहमतिमा पनि उनीहरू पुगेका छन् । हाल न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ गर्दै आइरहेका छन् । यसैबीच, यसअसघ प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास साझेदारी नगर्ने भनिरहेको न्यायाधीशहरूमा विभाजन देखिएको छ ।
सर्वोच्चका १९ मध्ये ६ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसँगै इजलासमा बस्न सहमत भएको सर्वोच्च स्रोतले जनायो । वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू भने प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास साझेदार नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको पेशी गोला प्रणालीबाट तोक्नेगरी ६ मंसिरमा नियमावली संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । मंसिर २ गतेको फुलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्नेगरी नियमावली संशोध गरेको थियो ।
देश गम्भीर संकटमा रहेकाले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको...
सर्वहारा वर्गको हितमा सदैव काम गर्न क्रियाशी : मन्...
कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन...
आज प्रम देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता
भूमिहीन स्वबासीको लालपूर्जाविहीन समस्या समाधान गछौ...
आफ्ना विरोधीहरुलाई पदाधिकारीमा नल्याउने याेजनामा ओ...
काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनमा देउवा पक्ष बलियो देखिँ...
नेपालको इतिहासमा लेखिने अर्को कालोदिन थपियो !
मष्टलाई जाति धर्मको रुपमा किन लेखाए खसहरुले ?
उपत्यकामा बिकासको नाममा उत्पादनशिल भूमि लुटिरहेको...
आर्मीका हवल्दार बलात्कारको आरोपमा कोटेश्वरबाट पक...